China DYSSQ yakateedzana mwenje imwe-shaft Shredder fekitori uye vanotengesa | JWELL
Yakazara seti yezvigadzirwa zvepurasitiki zvinogadziriswa
Mapurasitiki ekugadzirisa zvakare granulation michina
Chemical fiber kutenderera michina
Plastiki muchina zvishongedzo
DYSSQ akateedzana mwenje imwe-shaft Shredder
Kuti uve nharaunda ine hushamwari uye inokodzera zvakasiyana zvekugadzira zvinodiwa uye kupwanya zvinhu, DYUN yakatanga iyo DYSSQ mwenje shredder. Iyo inokodzera kubvarura uye kudzokororazve kwemasuwo, epurasitiki gobvu bhodhi, yekuvaka template, epurasitiki mafirimu uye akasiyana siyana epombi-kuumba midziyo inogadzirwa panguva yejekiseni kuumbwa, kufuridza kuumbwa uye extrusion. Zvinoenderana nenzira dzakasiyana dzekudyisa uye kudzokorodza saiti, vanofambisa uye vanopwanya vanogona kushongedzwa. Iyi shredder ine yakaderera-inomhanya rotary cutter, uye ndeye yakaderera ruzha, yakakwira kuburitsa uye yakawanda simba rekuchengetedza.
Iyo-shaft shredder inonyanya kugadzirwa neinotakurika banga rinotenderera (chokurukisa + blade), banga, bhokisi rinotakura, bhokisi rebhokisi, sisitimu yekudyisa, hydraulic kusundira system, simba system, uye yemagetsi system. Bvumira kadiki diki kemwenje uye mutete zvinhu zvesimbi mune izvo zvinhu panguva yebasa. Saizi yechinhu inogona kugadziridzwa zvinoenderana nehukuru hwesikirini yekuvhura.
Kugadzira ese marudzi emuchina musoro zvigadzirwa, jekiseni kuumbwa, uye extrusion zvimedu, zvinosanganisira PP, Pe, PET, PC, ABS, nylon, nezvimwe.
Mushure mokunge zvinhu zvapinda mukamuri yekutswanya kuburikidza neye hopper, iro rekusunda bhokisi rinotyairwa neiyo hydraulic chiteshi kusundira izvo zvinhu kune banga roller. Iyo banga rinotenderera rinotyairwa nemota, bhandi, pulley uye chinodzora, uye icho chinhu chakakwenenzverwa. Banga rinofambiswa rakagadziriswa nemabhaudhi. Pane chigaro chebanga chinotakurika chebanga roller, kana chishandiso chiri kumhanya, zvinhu zvinozobvarurwa nekubatana pakati pebanga rinofambiswa nebanga rakagadziriswa. Mukaha uripakati pebanga rinofambiswa nebanga rakagadziriswa rinogona kugadziriswa nemabhaudhi Izvo zvinhu zvakashatiswa neiyo imwechete-shaft shredder Izvo zvidimbu zvinoburitswa kuburikidza nechiratidziri, uye saizi yezvakaburitswa zvidimbu zvinotariswa nekuvhurwa kwechiso.
Kupwanya Chamber Saizi Max
DYSSQ-1000 400 22 × 2 54 5 850 × 1300 × 350
DYSSQ-1400 630 37 × 2 102 7 1200 × 1300 × 550
Ongorora: Ruzivo rwakanyorwa pamusoro ndere referenzi chete, tambo yekugadzira inogona kugadzirwa nezvinodiwa nevatengi.
Pashure: JWZ-BM30,50,100,160 Furidzira richigadzirisa Machine
Zvadaro: Dyss dzakateedzana diki imwechete-shaft Shredder
Dyss dzakateedzana diki imwechete-shaft Shredder
Kwete. 118, shangshang Road, Licheng To Town, Liyang, Changzhou guta, China
PVC Multi Rukoko Heat Insulation Corrugated Board, Kunze Kunyorera, Pe Pp Wood -Purasitiki Yekunze Kuwedzera, PVC Corrugated Bhodhi, PC Sheet Kuwedzeredzwa, PC Hollow Sheet Kuwedzeredzwa,